ZVINHU ZVINOITIKA - 60 Chepiri CHECKLIST - 9 Action Matanho! kugadzira chero bhizinesi rekuInternet
Shingairira paIndaneti nechinhu chero chipi zvacho, basa, hobby, bhizinesi, sangano kana kunyange kusimudza mari nekuda kwekuda kwako kana nzvimbo yako!
Heino mitsara ye9 yawakaona muvhidhiyo, iyo yakafukidzirwawo muCourse yakasununguka asi mune zvakawanda zvakadzama, zvizere zvikamu-nhanho-mirairo, zvishandiso zvinokosha uye zvidzidzo zvaunoda kubudirira!
1) Sarudza nyaya yeNiche
Iva nechokwadi chokuti inokodzera unyanzvi hwako, simba, zvido, zvinoda, uye unozviwana zvinonakidza!
2) Ita Mutokari Targeted
Nzira yako yakanaka ichava vanhu avo; vave nehanya nehurukuro yauri kuvhara uye vane chido chinoramba chisina kuzadzirwa chamuchapa mhinduro kana mhinduro.
3) Ita An Email List
Iwe unoda nzira yekubata zita uye email yekero yevanhu vanobatanidza nhamba yako yeimeri nekuzadza fomu shoma.
4) Ipa chipo
Ipa vashandi vepawebsite yako chipo chekukosha kwemashoko asina ruzivo mukudzoka kwemaawa e-mail.
Mushure mekunge vanhu vakupei email yavo iwe unoda kuva nehurongwa hwekutumira maeyili anovaka ukama, yeuchiyeuchidza kuti vatore chiito & mimwe michina.
6) Sarudza Zvimwe Zvokutengesa
Iwe unogona kutengesa zvigadzirwa zvako kana vamwe vanhu, kungova nechokwadi kuti vanofananidza nenyaya yako yenyaya uye kwete inodhura zvakanyanya kutanga nacho.
7) Unganidza mari paIndaneti
Tanga nekuvhura uye kushandisa PayPal account kutenga zvinhu nekuunganidza mari & shandisa chigadzirwa mapurisa anounganidza mari zvako.
Kupa magwagwa asingabhadhari kunotora nguva yakawanda kuti uenzane mune dzimwe nzvimbo dzakabhadharwa zvevashanyi vepawebhusayithi kuti ikurumidze mhinduro dzako.
9) Kugadzirisa Domain, hosting & website
Nzvimbo dzepaIndaneti dzakasununguka asi bhizinesi rinobudirira riri muIndaneti rine zita rayo roga uye rine unyanzvi webhusaiti yakaiswa kuitira kuwana mhinduro dzakanakisisa.
Tora chiito ikozvino nekunyora pasi apa!
HERE HERE! Shandisa kana Kutengesa Zvenyu - GDPR, Cookies & Privacy - Terms & Conditions
9 Matanho kuI ONLINE! SUCCESS mu 60 Seconds - tarisai iko zvino !!
Tora FREE Training ikozvino!
Bhokisi re 24 Maawa / 7 Mazuva pavhiki uye iwe uchabva wawana pakarepo;
Mirayiridzo Yerusununguko pakugadzirisa Iwe Up Online
Free eBook (Nezvimwe Zvinyorwa)
Kuwana zvishandiso zvangu zvakakosha & Zvigadzirwa
HERE HERE! Shandisa kana Kutengesa Zvenyu
Kuedza kwose kwakaitwa naCarl Henry Global sa. kunyatsomiririra zvigadzirwa zvedu uye zvigadzirwa zvatinokurudzira uye zvavanogona. Kunyange zvazvo inyanzvi yekutengeserana muIndaneti ndeimwe yevashoma apo munhu anogona kuva nehupfumi hwekubhadhara mari uye ine mari shoma shoma, hapana chivimbo chokuti iwe uchawana mari chero ipi zvayo uchishandisa maitiro uye mazano pane iyi webhusaiti uye mumapepa ekudzivirirwa. Mienzaniso muzvinhu izvi hazvifaniri kududzirwa sechipikirwa kana chivimbiso chekuwana mari. Kuwana mikana kunobva kune munhu anoshandisa chigadzirwa chedu, pfungwa uye maitiro. Isu hatisi kukurudzira mikana sezvo iyi se "kuwana pfuma hurongwa".